အရောင် Flash ကိုဖွင့်တင် - မျက်နှာပြင် Call, Themes | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အရောင် Flash ကိုဖွင့်တင် - မျက်နှာပြင် Call, Themes
အရောင် Flash ကိုဖွင့်တင် - မျက်နှာပြင် Call, Themes APK ကို
အရောင် Flash ကိုဖွင့်တင် - ပြောင်းလဲနေသောခေါ်ဆိုခကို flash နဲ့အရောင်ဖုန်းကို themes များနှင့်သင်၏ရောင်စုံဘဝကိုဦးတည်သွားစေ။ ခေါ်ရန်ဖုန်းမျက်နှာပြင် & တိုက်ရိုက်နောက်ခံများ changer သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုထွန်းလင်းနှင့်အေးမြစေသည်။💕ထိပ်တန်းအင်္ဂါရပ်များ
✔️Callမျက်နှာပြင် themes များ - သင့်ခေါ်ဆိုခမျက်နှာပြင်စတိုင်ပါစေ။ ခေါ်ရန်ဖုန်းမျက်နှာပြင် changer ကြောက်မက်ဘွယ်ခေါ်ဆိုခမျက်နှာပြင် themes များပေးသင်တို့အဘို့အထူးသင့်ရဲ့ခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင် display ကိုလုပ်မည်!
android ဖုန်းအခမဲ့✔️Hot themes များ - အရှိဆုံးအသုံးဝင်သောအရောင်ဖုန်းကို themes များပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။ အခမဲ့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ခေါ်ဆိုခမျက်နှာပြင် themes များအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုဒီနေရာမှာသင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။
✔️Coolနောက်ခံပုံများ - တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများနှင့် 3D နောက်ခံပုံအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုအလွယ်တကူရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အခမဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများသင့်ရဲ့နောက်ခံကိုပိုမိုထွန်းလင်းဘဲနေကြပါစေ
✔️Emoji - ချစ်စရာရုပ်ပြောင်စတစ်ကာများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကဒီမှာရှိပါတယ်။
✔️Transitionအကျိုးသက်ရောက်မှု - သင့်နောက်ခံနှင့်အတူကိုက်ညီအအေးဆုံး 3D အကူးအပြောင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကောက်။
🎨Prettyခေါ်ရန်မျက်နှာပြင် & တိုက်ရိုက်နောက်ခံများသင်တို့အဘို့တယောက်အမြဲရှိပါသည်။
-App သော့ခတ်: privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ app ကိုသော့ခတ်
-Hide app ကို: အိမ် screen ပေါ်မှာ app ကိုဖုံးကွယ်
System ကို optimization:
-Junk သန့်စင်: Junk ဖိုင်များကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ
-Notification သန့်စင်: စည်းရုံးအသိပေးချက်များကိုမလိုချင်တဲ့သူမြားကိုဖယျရှားနိုငျ
Tools များနှင့် plug-in:
-Widgets: အဖွင့်တင်ပေးနှင့် system ဝစ်ဂျက်များအမြန်ဝင်ပေါက်
-Notification toolbar ကို: အ tools များရန်လွယ်ကူ access ကို
google search engine ကိုအတူ -Search ဘား
-Unread သတင်းစကား: မဖတ်ရသေးသောမက်ဆေ့ခ်ျ၏နံပါတ်ရ
-Screen မန်နေဂျာ: လျင်မြန်စွာ icon တွေကို align
-Smart ဖိုင်တွဲ: အလားတူလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ apps များတူညီ folder ထဲမှာစီစဉ်ပေးလိမ့်မည်
-Desktop ဆက်တင်: အိုင်ကွန်စတိုင်နဲ့ font ကိုစတိုင်ညှိ
-Menu: ဘုံ features တွေအမြန် access ကို
-Online ဂိမ်း: 20 + H5 ဂိမ်း
Download နှင့်သင့်အသစ်နှင့်ရောင်စုံခေါ်ဆိုခ flash ကိုပျော်မွေ့, အရောင်ဖုန်းကို themes များနှင့်အရောင် Flash ကိုဖွင့်တင်နှင့်အတူဖန်သားပြင် changer ကိုခေါ်ပါ။ ထူးခြားတဲ့ခေါ်ဆိုသူ၏ screen ကိုစတိုင်နဲ့ခေါ်ဆိုသူ၏ screen ကိုခင်းကျင်းပြသနှင့်အတူမျက်လုံး-ဖမ်းခေါ်ဆိုသူ၏ screen ကိုသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုသင်တို့အဘို့အထူးတဦးတည်းဖြစ်ရစေမည်!
သတိထားမိ: ဤ app ထဲမှာရှာဖွေရေး၏ function ကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဖြစ် Google ကအသုံးပြုသည်။ ဒီအဖွင့်တင်ပေး app ကိုသင့်ရဲ့ default home screen ကိုပြောင်းလဲစေပါလိမ့်မယ်သင်ကသင့်ရဲ့ဖုန်း setting တွင် default အများကိုရှင်းလင်းနိုင်ပါသည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်မြန်နှုန်းများအတွက် -Improvements ။
အရောင် Flash ကိုဖွင့်တင် - မျက်နှာပြင် Call, Themes
34.03 ကို MB
Launcher ကို IN - ...